Waa maxay Mashiinka Dukaameysiga Isbarbardhiga ugu Fiican? | Martech Zone
Waa maxay Mashiinka Dukaameysiga Isbarbardhiga ugu Fiican?
Khamiis, Juun 14, 2012 Khamiis, Juun 14, 2012 Andrew Davis
Istaraatiijiyadda CPC waxay uruurisay xogta in ka badan 100 tafaariiqle oo khadka tooska ah ku kala duwan, qiyaastii 4.2 milyan oo guji iyo 8 milyan oo dakhli ah si loo go'aamiyo isbarbardhigga ugu wanaagsan matoorada wax iibsiga ee khadka tooska ah.
Isbarbardhiga mashiinnada wax iibsiga waxaa ka mid ah bogagga internetka sida Pricegrabber, Nextag, Amazon Product Ads, Shopping.com, Shopzilla iyo Google Shopping.
Daraasada waxaan ku lafagureynaa goobaha dukaamaysiga ugu fiican ee ganacsiga ecommerce taraafikada, dakhliga, sicirka beddelka, qiimaha iibka, iyo qiimaha halkii guji, oo aan ku darno si loo go'aamiyo miisaanka culus ee CSE.
Hoos waxaa ku yaal dulmar guud oo kooban oo ku saabsan Warbixinta Goobaha Dukaameysiga ee Isbarbardhiga ugu Fiican 2012:
Guud ahaan Ku guuleystayaasha
10ka ugu sarreeya CSE -yada 2012
# 1: Raadinta Badeecada Google (Goor dhow waxay noqon doontaa Google Shopping - PAID) - faahfaahin dheeri ah oo taa ku saabsan halkan)*
Dukaameysiga Google ayaa ah CSE-da ugu sarreysa xukunka labadaba Q1 2011 iyo Q1 2012, waana in muddo ah. In kasta oo Shopzilla ay ku garaacday Google guud ahaan taraafikada sanadkii 2011, iyo Amazon Product Ads ayaa u hanqal taagaya meesha ugu sarreysa sanadka 2012, Google waxay si isdaba joog ah u soo saartaa tiro badan oo taraafiko ah, waxayna ku badan tahay labada dhinacba dakhliga guud.
Nextag ayaa guriga keentay kaalinta labaad ee guud ahaan tayada CSE sanadkii labaad oo isku xigta waxayna xaqiijisay kaalinta ugu sareysa ee goobaha wax iibsiga isbarbar dhiga ee la bixiyay sanadkii 2012. Halka guud ahaan taraafikada Nextag ay hoos u dhacday sanadkii hore, hadana waa mishiinka labaad ee ugu weyn ee kaxeeya dakhliga ( ka dib Google), labadaba 2011 iyo 2012. Nextag sidoo kale si weyn ayey u fiicnaatay marka loo eego beddelaadda iyo qiimaha halkii guji (CPC) ee sannadka 2012.
# 3: Qiimaha qiimaha
Halka Shopzilla ay qaadatay kaalinta ugu sarreysa mashiinka sanadkii 2011, Pricegrabber ayaa mishiinka ka soo saaray Q1 2012. In kasta oo qiimaha Pricegrabber ee COS iyo CPC uu hoos u dhacay, haddana taraafikada iyo dakhliga ayaa si joogto ah labada dhinacba ugu sugnaa.
Goobaha Beddelashada Sare
# 1: Raadinta Alaabada Google
Raadinta Wax soosaarka Google wuxuu ahaa mashiinka labaad ee taraafikada taraafikada ee ugu sarreeya 2012, iyo isha ugu weyn ee dakhliga ganacsatada. Sidaa darteed, labadaba 2011 iyo 2012, Google wuxuu guriga u qaatay dahabka loogu talagalay Heerka Beddelka ee qiimeynteenna.
Isla Google dakhliga soo gala, Nextag waa mishiinka labaad ee ugu badan ee beddela ganacsatada 2012.
In kasta oo uu mashiin yar yahay, Pronto wuxuu feer adag ku hayaa is-beddelka ganacsiga, isagoo soo koobaya 3-da matoor ee ugu sarreeya heerka beddelaadda.
Qiimaha ugu Fiican Goobaha Iibinta (COS)
# 1: Qiimaha qiimaha
Ka dib CSE-yada bilaashka ah, Pricegrabber ayaa helay kaalinta ugu sareysa ee mashiinka ugu fiican qiimaha iibka (COS). Waxay sidoo kale ka mid tahay matoorrada oo hoos u dhacay guud ahaan COS sannadihii 2011 ilaa 2012.
In kasta oo Nextag's COS dhab ahaantii kordhay 2012, haddana wali waa xulashada labaad ee ugu wanaagsan ee matoorada wax iibsiga ee COS.
Isku soo wada duub liiska, Shopping.com ayaa garaacday Amazon Product Ads ee matoorada saddexaad ee ugu hooseeya COS.
Movers iyo Shakers for 2012
Dukaamaysiga.com waxay ku dhacday wadadeedii ilaa kaalinta afaraad guud ahaan qiimeynta mishiinka sanadka 2012, horey waxay u timid 6th.
Pronto ayaa ka galay kii ugu dambeeyay qiimeynta guud ilaa kaalinta 7aad ee sanadka 2012.
Iftiinka Mashiinka: Xayeysiiska Alaabada Amazon
Xayeysiiska Alaabada Amazon waa mid ka mid ah CSE-yada cusub ee halkaa ku yaal sidaa darteed waxaa loo arkaa kobaca ugu badan sanadihii la soo dhaafay. Q1 2012 wuxuu arkay koror weyn oo xagga taraafikada ah oo loogu talagalay Xayeysiinta Alaabada Amazon, iyo sidoo kale dakhli soo gala. In kasta oo xaddiga beddelaadda ee Xayeysiinta Alaabada Amazon ay hoos uga dhacday Q1 2011 ilaa Q1 2012, qulqulka ganacsatada ku taxan barnaamijka, kordhinta tartanka midba midka kale ayaa u badan inay sabab u tahay hoos u dhaca beddelaadda.
* Raadinta Alaabada Google waxay si rasmi ah u noqon doontaa Google Shopping bisha Oktoobar, baro sida loogu diyaar garoobo halkan.
Dhagsii xiriirka soo socda si aad u hubiso daraasadda oo dhammaystiran isbarbardhigga ugu wanaagsan ee goobaha wax iibsiga.
Alteryx: Sirdoonka Ganacsiga iyo Falanqaynta Istiraatiijiga ah
Muxammad Ahsan Dar
Apr 3, 2014 at 3: 49 PM
Maxay ahaayeen sababaha ugu waaweyn ee u dumay shopzilla?
Sep 28, 2014 at 4: 11 PM
Way fiicnaan laheyd haddii aad qorto maqaal la mid ah oo ku saabsan matoorada Raadinta Isbarbardhiga cusub iyo kuwa soo socda. Laba aan si joogto ah u isticmaalo ayaa ah http://www.slycut.com iyo http://www.price zombie.com oo waxay bixiyaan heshiisyo jaban ama natiijooyin ka xiiso badan kuwa tafaariiqda dhaqameed.